News Collection: यौनसम्पर्कमा किन पीडा हुन्छ ?
यौनसम्पर्क एउटा आनन्ददायक क्रियाकलाप हो। सम्भवतः मानिसले यौनसम्पर्कको माध्यमबाटै सबैभन्दा चरम आनन्द प्राप्त गर्छ। असीम आनन्द, चरमसुख, स्वर्गीय आनन्दजस्ता कतिपय नाम पनि यो यौनसम्पर्कको आनन्दसँग जोडिएका छन्, तर अर्कातिर यथार्थ के पनि हो भने सबै यौनसम्पर्क सुखमय नहुन सक्छन्। प्रश्नमा पर्याप्त जानकारी नभएकाले तपाईंले के अनुरोध गर्नु भएको भएको हो, यकिन भन्न नसकिए पनि यौनसम्पर्कमा पीडा हुने कारणहरूका बारेमा चर्चा गरौं।
यौनसम्पर्क राख्दा महिलाहरूमा पीडा हुने कारणहरूमा योनिको संक्रमण प्रमुख हुनसक्छ। सामान्यभन्दा धेरै, मैलो अनि गन्हाउने पानी आउनु योनि संक्रमणका लक्षण हुन सक्छन्। योनिद्वार नजिकका ग्रन्थिको संक्रमण पनि यौनसम्पर्क गर्दा पीडा हुने कारण हुन सक्छ। संक्रमणको शंका छ भने चिकित्सको सहयोगमा उपचार गराउनुपर्छ।
योनि सुख्खा भएको स्थितिमा यौनसम्पर्क गर्दा पनि पीडा हुन्छ। योनिमा पर्याप्त मात्रामा रस नआउनु त्यसको कारण हो। यस्तो स्थितिमा यौ नसम्पर्क गर्दा योनि पोल्छ। यौनसम्पर्कका बेला योनि सुख्खा भएर दुख्ने समस्या कम गर्न थप चिल्लो पदार्थ प्रयोग गर्न सकिन्छ। पानीमा आधारित चिप्लो पदार्थ जस्तै- KY Jelly प्रयोग गर्नुपर्छ ताकि कन्डमलाई कुनै क्षति नपुगोस्। कतिपयले थूकलाई राम्रो विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्छन्।
त्यसैगरी यौनसम्पर्कसम्बन्धी नकारात्मक धारणाले ग्रसित भएको स्थितिमा वा डर भएको स्थितिमा यस्तो हुन्छ। विशेष गरेर भयातुर वा डर भएका कारण यौनसम्पर्क गर्न लाग्दा अकस्मात् योनिको मांसपेशी संकुचित भएर कडा हुन्छ। यस्तो बेला यौनसम्पर्क राख्दा पीडा हुन्छ। यस किसिमको अवस्थालाई Vaginismus भनिन्छ। कुनै तनाव वा भय छ भने त्यसलाई कम गर्ने प्रयास गर्नुपर्‍यो। यसका लागि राम्रोसँग सहज वातावरणमा कुराकानी गर्नुहोस् र त्यस्तो केही भए त्यसलाई हटाउने प्रयास गर्नुहोस्।
हस्तमैथुनले शरीरको उचाइ बढ्छ भन्ने सुनेको छु। के यो सत्य हो ? यदि सत्य हो भने कति मात्रा गर्दा उचित होला ?
के हस्तमैथुनले उचाइ बढाउँछ ?
उमेर त लेख्नुभएको छैन, तर तपाईं किशोरावस्थामै हुनुहुन्छ जस्तो लागेको छ। किशोरावस्था भनेको कुनै व्यक्ति 'बाल्यकालबाट वयस्क' हुने परिवर्तनशील अवस्था हो। यही बेला किशोर तथा किशोरीहरूको प्रजनन, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रमा विकास हुन्छ र उनीहरू परिपक्व हुन्छन्। किशोरावस्थामा पुगेपछि विभिन्न हार्मोन निःसृत हुन्छन् र ती हार्मोनको प्रभावमै अनेक किसिमका शारीरिक, भावनात्मक एवं यौन परिवर्तनहरू हुन्छन्।
हलक्क बढ्नु र काँध चौडा हुनु, दाह्री-जुँगा आउनु, स्वर धोद्रो हुनु, काखीमुनि रौं आउनु, पसिना ग्रन्थि बढी सक्रिय हुनु र पसिना धेरै आउनु, यौन केश (यौन अङ्ग वरिपरी रौं) आउनु, डण्डीफोर आउनु, लिङ्ग तथा अण्डकोष बढ्नु, वीर्य उत्पादन सुरु हुनु, लिङ्ग उत्तेजित हुने क्रम बढ्नु र कहिलेकाहीं स्वतः उत्तेजित हुनु, स्वप्नदोष हुनु केही प्रमुख शारिरीक परिवर्तन हुन्।
त्यसैगरी अर्को व्यक्तिप्रति यौनका दृष्टिकोणले आकर्षण बढ्नु, यौनचाहना हुनु, यौनचाहना प्रकट हुनु तथा यौनसम्बन्धी कुराको खोजीनीति गर्ने हुनु, मनोदशा (moods) मा चाँडो चाँडो परिवर्तन हुनु, बढी स्वतन्त्र हुने प्रयास गर्नु, बढी गोपनीयता चाहने, आफ्नो शारीरिक परिवर्तनका सम्बन्धमा बढी सोच्ने र आफ्नो स्वरूपका बारेमा अलमलिने, महिनावारी, स्वप्नदोष, हस्तमैथुन, स्तन वा लिङ्गको आकारबारे बढी चिन्ता गर्ने, के म ठीक छु ? भन्ने प्रश्न गर्नेजस्ता अनेक यौन तथा भावनात्मक परिवर्तन हुन्छन्। यी परिवर्तन सबैमा एकनासको हुँदैन। व्यक्ति- व्यक्तिअनुसार चाँडो-ढिलो वा धेरै वा थोरै हुन्छ।
अब त पक्कै बुझ्नुभयो होला- शरीरमा भएका हार्मोनहरूको प्रभावले एकातिर तपाईंको उचाई बढाउँछ भने अर्कातिर यौनचाहना बढाउनुका साथै हस्तमैथुनजस्ता क्रियाकलाप गराउँछ। यी दुवै सँगसँगै हुने भएकाले तपाईंलाई हस्तमैथुनले उचाइ बढाएजस्तो लाग्न सक्छ। यो कारकभन्दा पनि प्रभाव हो। हस्तमैथुन धेरै पटक गरेका कारण नै कुनै व्यक्ति बढी अग्लो हुने होइन।
धेरै हस्तमैथुन गरेका कारण उचाइ धेरै बढ्ला भन्ने पीर गर्नु पर्दैन। कति पटकसम्म हस्तमैथुन गर्नु हुन्छ त ? भन्ने तपाईंको प्रश्नको छोटो उत्तर 'जति पटक चाहनुहुन्छ त्यति पटक' हुनसक्छ। तपाईंको शरीरमा भैरहेको परिवर्तनले स्वाभाविक रूपमै यौनचाहना बढाउँछ र शरीरले त्यसलाई पूरा गर्न खोज्छ नै। नियमित यौनसम्पर्क गर्ने अवसर नहुँदा हस्तमैथुन यौन तनाव शान्त पार्ने राम्रो उपाय हो।